China JKY80 / 70-4.0 Vacuum Extruder vagadziri uye vanotengesa | Bricmaker
Iyi modhi yekutsiva extruder michina inonyanya kushandiswa kune akasiyana zvidhinha kana mabhuroko extrusion. Uye chizvarwa chitsva chemidziyo inorema-basa uye zvakanyanya zvekugadzirwa kwemarara ekuparadza, zvakapambwa, ivhu, ivhu, matope, shale, marasha, dota, gangue uye nezvimwe.
Muna 2020, isu takatumira kuUS tekinoroji yepamusoro, inosanganisirwa neanopfuura makore makumi matatu ekushongedzwa kwekugadzira ruzivo, yakabudirira yakazvimiririra R&D JKY80 / 70-4.0 Yakaomarara-Ipurasitiki Double-Stage Vacuum Extruder, yakachengetwa pamberi pemusika zvigadzirwa zvinogadzirwa.
Iyi modhi yekutsiva extruder reamer inogamuchira yekupedzisira dhayamita ndeye 800mm, uye yekupedzisira extrusion auger dhayamita magumo ndeye 700. Pasi peichi chakanaka extrusion compression ratio, iyo inokodzera zvakanyanya kugadzira yekupisa yekuisa pamadziro emadziro, kupatsanura mataira nezvidhinha, hombe chikamu chemuchinjikwa hollow kupisa kwemafuta pamwe yepamusoro mhango reshiyo.
a) Yakawedzera Auger: Welded nekupfeka nemishonga electrode, iyi auger inogona kugadziriswazve; kupfapfaidza simbi inopesana nesimbi zvinhu (kuomarara inguva nomwe dzeyakajairwa imwe), izvo zvinoita kuti hupenyu hurefu hwebasa.
b) Kusanganisa reamer: yakakwira chromium yekukanda zvinhu neakakwirira ekupfeka kuramba chinhu, ine hupenyu hwakareba hwekugadzira 30+ mamirioni ezvidhina kana mabhuroko.
c) Giya rinodzora: yakagamuchirwa super mhando chiwanikwa simbi zvinhu izvo zvinogadzirwa ne carburizing, kudzima, kukuya maitiro, Chikamu-6 giredhi chaiyo, kuomarara kwayo kunosvika HRC54 ~ 62 ine chimiro chepamusoro kurodha chinzvimbo uye hwakareba hupenyu.
d) Master shaft: yakagamuchira iyo Chinese yemhando yepamusoro shaft zvinhu zve40Cr kana yekushambadzira kodhi 45, zvese zvigadzirwa zvine mhando kupisa kurapwa, iyo ine zvakanakira yakanaka yekupfeka kuramba, yakasimba simba torque uye hwakareba hupenyu.
e) Kubereka: mabheji ese emidziyo akagamuchira iyo inozivikanwa yepasi rose brand brand Timken Kubereka uye Chinese yepamusoro inozivikanwa brand Hawaluo inobereka etc.
Chigadzirwa Chekupedzisira Hollow thermal insulation mabhuroko / pani
Zvadaro: JKY75 / 65EIII IV-4.0 Vacuum Extruder
KAWASAKI Robhoti Zvidhina